Delayed walking – My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
ကလေးငယျတဈယောကျမှာ သူ့ဘဝရဲ့ ပထမဆုံး ၂နှဈမှာ ကွီးထှားဖှံ့ဖွိုးမှုအမြားအပွားကို သငျယူတတျမွောကျရပါတယျ။ ဒီအထဲမှာ လမျးလြှောကျခွငျးလညျးပါဝငျပါတယျ။ ယဘေူယအြားဖွငျ့ ကလေးငယျတဈဦးဟာ အသကျ ၁၁လ မှ ၁၅လအတှငျး လမျးစမျးပွီး လြှောကျစပွုပါပွီ။ အကယျ၍ ၁၈လကြျောသညျအထိ လမျးမလြှောကျသေးရငျတော့ စတငျပွီးစိုးရိမျရပါပွီ။ ဒါပမေယျ့ အခွားသောဖှံ့ဖွိုးမှုမြား၊ ခန်ဓာကိုယျကွံခိုငျမှုမြား ပုံမှနျရှိတယျဆိုရငျတော့ စောငျ့ကွညျ့နိုငျပါသေးတယျ။ ဒါဆိုရငျ စိတျပူရတဲ့ လမျးလြှောကျနှေးခွငျးနဲ့ အခွားအကွောငျးအရာတှကေ ဘာတှမြေားလဲ ကွညျ့ကွရအောငျ။
၁.. စီပီ သူငယျနာရောဂါ
မှေးခြိနျမှာသှေးပေါငျ၊ ရပေေါငျသောကွောငျ့သျောလညျးကောငျး မှေးဖှားပွီးမှ ဦးနှောကျအမွှေးရောငျခွငျး၊ အသားဝါတကျခွငျးကွောငျ့သျောလညျးကောငျး သူငယျနာဖွဈတဲ့ကလေးတှဟော ဖှံ့ဖွိုးမှုနောကျကသြလို လမျးလြှောကျလညျးနောကျကတြတျပါတယျ။
၂. နာတာရှညျ ကလေးငယျ
တဈနှဈအောကျကလေးငယျအရှယျမှာ နာတာရှညျရောဂါကွောငျ့ အိပျယာပျေါမှာလဲလြောငျးလကျြအခြိနျကုနျရတဲ့ကလေးမြားဟာ လမျးလြှောကျခွငျး၊ မတျမတျရပျခွငျးနညျးပါးတဲ့အတှကျ သာမနျကလေးမြားထကျ လမျးလြှောကျခြိနျနောကျကတြတျပါတယျ။
အခြို့ကလေးတှမှော မြိုးရိုးဗီဇကွောငျ့ မှေးရာပါကွှကျသားအားနညျးခွငျး (ဥပမာ Duchenne Muscular Dystrophy) ရောဂါပါလာတတျပါတယျ။ ဒီအခါမှာ ကလေးငယျရဲ့ခွထေောကျခွထေောကျတှဟော မတျမတျရပျဖို့ အားပွုဖို့အတှကျ အားအငျမလုံလောကျတဲ့အတှကျလမျးမလြှောကျနိုငျတော့ပါဘူး။
အကွမျးဖငျြးအားဖွငျ့ ယောကျြားကလေးတှဟော မိနျးကလေးတှထေကျ လမျးလြှောကျနောကျကတြတျပါတယျ။ အထူးသဖွငျ့ ဖငျတရှတျဆှဲသှားတတျတဲ့ကလေးတှဟော သဘာဝအလြောကျကို လမျးလြှောကျနောကျကတြတျပါတယျ။ ဒါ့ကွောငျ့အခွားသော ခြို့ယှငျးခကျြမြားမရှိဘဲ လမျးလြှောကျတာတဈခုပဲနောကျကတြာဆိုရငျတော့ တကျလကျစောငျ့ကွညျ့စခေငျြကွောငျးတငျပွရငျး။
ကလေးငယ်တစ်ယောက်မှာ သူ့ဘဝရဲ့ ပထမဆုံး ၂နှစ်မှာ ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှုအများအပြားကို သင်ယူတတ်မြောက်ရပါတယ်။ ဒီအထဲမှာ လမ်းလျှောက်ခြင်းလည်းပါဝင်ပါတယ်။ ယေဘူယျအားဖြင့် ကလေးငယ်တစ်ဦးဟာ အသက် ၁၁လ မှ ၁၅လအတွင်း လမ်းစမ်းပြီး လျှောက်စပြုပါပြီ။ အကယ်၍ ၁၈လကျော်သည်အထိ လမ်းမလျှောက်သေးရင်တော့ စတင်ပြီးစိုးရိမ်ရပါပြီ။ ဒါပေမယ့် အခြားသောဖွံ့ဖြိုးမှုများ၊ ခန္ဓာကိုယ်ကြံခိုင်မှုများ ပုံမှန်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ စောင့်ကြည့်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒါဆိုရင် စိတ်ပူရတဲ့ လမ်းလျှောက်နှေးခြင်းနဲ့ အခြားအကြောင်းအရာတွေက ဘာတွေများလဲ ကြည့်ကြရအောင်။
၁.. စီပီ သူငယ်နာရောဂါ
မွေးချိန်မှာသွေးပေါင်၊ ရေပေါင်သောကြောင့်သော်လည်းကောင်း မွေးဖွားပြီးမှ ဦးနှောက်အမြှေးရောင်ခြင်း၊ အသားဝါတက်ခြင်းကြောင့်သော်လည်းကောင်း သူငယ်နာဖြစ်တဲ့ကလေးတွေဟာ ဖွံ့ဖြိုးမှုနောက်ကျသလို လမ်းလျှောက်လည်းနောက်ကျတတ်ပါတယ်။
၂. နာတာရှည် ကလေးငယ်
တစ်နှစ်အောက်ကလေးငယ်အရွယ်မှာ နာတာရှည်ရောဂါကြောင့် အိပ်ယာပေါ်မှာလဲလျောင်းလျက်အချိန်ကုန်ရတဲ့ကလေးများဟာ လမ်းလျှောက်ခြင်း၊ မတ်မတ်ရပ်ခြင်းနည်းပါးတဲ့အတွက် သာမန်ကလေးများထက် လမ်းလျှောက်ချိန်နောက်ကျတတ်ပါတယ်။
အချို့ကလေးတွေမှာ မျိုးရိုးဗီဇကြောင့် မွေးရာပါကြွက်သားအားနည်းခြင်း (ဥပမာ Duchenne Muscular Dystrophy) ရောဂါပါလာတတ်ပါတယ်။ ဒီအခါမှာ ကလေးငယ်ရဲ့ခြေထောက်ခြေထောက်တွေဟာ မတ်မတ်ရပ်ဖို့ အားပြုဖို့အတွက် အားအင်မလုံလောက်တဲ့အတွက်လမ်းမလျှောက်နိုင်တော့ပါဘူး။
အကြမ်းဖျင်းအားဖြင့် ယောက်ျားကလေးတွေဟာ မိန်းကလေးတွေထက် လမ်းလျှောက်နောက်ကျတတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဖင်တရွတ်ဆွဲသွားတတ်တဲ့ကလေးတွေဟာ သဘာဝအလျောက်ကို လမ်းလျှောက်နောက်ကျတတ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်အခြားသော ချို့ယွင်းချက်များမရှိဘဲ လမ်းလျှောက်တာတစ်ခုပဲနောက်ကျတာဆိုရင်တော့ တက်လက်စောင့်ကြည့်စေချင်ကြောင်းတင်ပြရင်း။